42 Comments / Blog, raharaham-pitsarana / By Sarah
Karazana tranga heloka bevava any Dubai sy ny fomba hanampian'ny mpisolovava anao
Any Emirà Arabo Mitambatra, ny sampan-draharahan'ny fampanoavana no misahana ny raharaha heloka bevava. Ireo sampana ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fanenjehana ireo olona na orinasa voampanga ho nanao raharaham-barotra tsy ara-dalàna. Ity manaraka ity dia topimaso momba ny karazana trangan-dalàna 5 mahazatra indrindra any Dubai sy ny fomba ahafahan'ny mpisolovava manampy anao amin'ny raharahanao.
Mora ny mitatitra heloka bevava any amin'ny polisy any Emirà Arabo Mitambatra.
Ny lalàna momba ny heloka bevava dia sampana lalàna izay mirakitra ny fandikan-dalàna rehetra sy ny heloka bevava ataon'ny olona iray amin'ny fanjakana. Ny tanjona dia ny hametraka mazava ny sisin-tany amin’izay heverina ho tsy azo ekena amin’ny fanjakana sy ny fiarahamonina. Voafaritra tsara izany satria ny fitsipika dia manilika ny fitondran-tena azo ekena sy azo leferina amin'ireo izay mandrahona, mampidi-doza ary manimba ny vahoaka. Ny lalàna momba ny heloka bevava ihany koa dia manantitrantitra ny sazy tsy maintsy atrehin'ireo voampanga.
Na izany aza, ny raharaha momba ny heloka bevava dia tsy maintsy raisina mazava tsara manoloana ny raharaha sivily. Ny heloka bevava dia fanitsakitsahana ny fiaraha-monina na ny fanjakana amin'ny fitambarany. Raharaha sivily dia matetika ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny olona momba ny andraikitra ara-dalàna ananany. Ny tranga heloka bevava sy sivily koa dia tsy mitovy amin'ny sazin'izy ireo. Ny tranga sivily dia mitaky fahasimbana ara-bola fotsiny na homena zavatra hatao. Etsy ankilany, ny raharaham-pitsarana dia mila mitaky am-ponja an-taonany ireo meloka. Mety mila sazy sazy na lamandy koa izany.
Karazana raharaha momba ny heloka bevava any Dubai
Raharaham-pitsarana momba ny heloka bevava Mety tsy hitovy amin'ny fandikan-dalàna.
Fanodinkodinana dia heloka kely ary heloka kely fotsiny. ny Misdemeanor dia azo saziana lamandy na fotoana an-tranomaizina tsy ampy herintaona ao amin'ny fonja iray eo an-toerana. Ohatra amin'ny tsy fahombiazana ny halatra madinidinika, ny fitondrana fiara amin'ny alàlan'ny fitaomana, ny alikaola tsy ampy taona, sns.
heloka bevava, etsy ankilany, heloka bevava lehibe natao ary azo saziana an-tranomaizina mandritra ny herintaona mahery. Ohatra amin'ny heloka bevava ny fanolanana, fivadihana, fakana ankeriny, fandrobana, famonoana olona ary fanondranana zava-mahadomelina.
Famonoan-jiolahy ratsy ampidiro ireo voampanga tsy ampy taona. Satria miahiahy ny zaza tsy ampy taona dia omena sazy malefaka kokoa izy ireo raha jerena ny taonany, ny fanabeazana ary ny anton-javatra hafa.
Heloka bevava eto an-drenivohitra mitaky fanagadrana mandritra ny androm-piainana na fahafatesana. Ohatra amin'ny heloka bevava ny famonoana olona sy fanolanana. Ny heloka be vava dia nihevitra ny fikasan'ny olona hamono ary tafiditra amin'ny hetsika izay mitaky ny hanaovana ilay hetsika efa nomanina.
Heloka kely Ny fandikan-dalàna ihany no azo faizina. Ny heloka bevava bitika dia tsy mila apetraka amin'ny fitsarana ary tsy mila ampidirina am-pitsarana tanteraka. Ny heloka kely dia kely dia mety ahitana: tsy fanahy iniana mandratra biby fiompy fananan'ny hafa. Mety handoa onitra 5000 Dirhams ilay naratra.
Ireto misy ohatra hafa amin'ny heloka bevava izay voararan'ny Lalànan'ny Heloka:
Fanafihana sy Batterie - ao anatin'izany ny fanenjehana, ratra ary fanararaotana.
fandoroana – anisan’izany ny fipoahana fanahy iniana na ny fandoroana afo hanimba fananana. Sazy an-tranomaizina hatramin'ny 20 taona ny ankamaroany.
Miaramila robbery - ny halatra, indrindra rehefa mitam-piadiana, dia azo saziana amin'ny sazy henjana.
Fanararaotana zaza – heloka be vava hafa indray ity. Mety ho saziana an-taonany maro an-tranomaizina ireo mpanararaotra ankizy
fakàna an-keriny – Mitranga ity raharaha lalàna momba ny heloka bevava ity rehefa nalain’ny olon-kafa an-keriny ny olona iray ary natao ho vidim-panavotana. Ny raharaha fakana an-keriny dia mahazo sazy henjana kokoa raha misy fakàna an-keriny zaza tsy ampy taona sy fakana an-keriny mandritra ny fangalarana fiara.
Heloka amin'ny fankahalana - Tafiditra ao anatin'izany ny herisetra mivaivay amin'ny olona iray hafa firazanana, fironana ara-pananahana na ireo manana toetra hafa.
Zanak’omby lahy - Ity dia karazana raharaham-pitsarana momba ny heloka bevava izay mahafaty olona tsy fanahy iniana na fahafatesan'ny olona iray.
Ahoana no ahafahan'ny mpisolovava manampy anao
Araka ny voalaza ao amin'ny Andininy faha-4 amin'ny andininy ankapobeny an'ny Lalàna federaly No. 35/1992, izay olona voampanga ho nanao heloka bevava an-tranomaizina mandra-pahafaty dia tsy maintsy ampian'ny mpisolovava azo antoka. Raha tsy zakan'ilay olona izany dia manendry iray ho azy ny fitsarana.
Amin'ny ankapobeny, ny fampanoavana dia manana fahefana manokana hanatanteraka ny famotopotorana sy hitarika fiampangana araka ny voalazan'ny lalàna. Na izany aza, ny tranga sasany voatanisa ao amin'ny Andininy faha-10 amin'ny lalàna federaly No. 35/1992 dia tsy mila ny fanampian'ny mpampanoa lalàna, ary ny mpitory dia mety mametraka izany hetsika izany amin'ny alàlan'ny solontenany ara-dalàna.
Zava-dehibe ny manamarika fa, any Dubai na Emirà Arabo Mitambatra, ny Mpisolovava Emirati mahafeno fepetra dia tsy maintsy mahay teny Arabo ary manan-jo amin'ny mpihaino; raha tsy izany, mitadiava ny fanampian’ny mpandika teny rehefa avy nanao fianianana. Marihina fa tapitra ny asan-jiolahy. Ny fisintonana na ny fahafatesan'ilay niharam-boina dia tsy hanan-kery intsony.
Mila mpisolovava UAE ianao izay afaka manampy anao hamakivaky ny lalanao amin'ny rafi-pitsarana heloka bevava mba hahazoanao ny rariny mendrika anao. Satria raha tsy misy ny fanampian'ny saina ara-dalàna, ny lalàna dia tsy hanampy ireo niharam-boina izay tena mila izany.
Ara-dalàna ny anao fifampidinihana aminay hanampy anay hahatakatra ny toe-javatra misy anao sy ny ahiahinao. Raha miatrika fiampangana heloka bevava any UAE ianao na olon-tianao dia afaka manampy izahay.
Mifandraisa aminay handamina fivoriana. Manana mpisolovava mpanao heloka bevava tsara indrindra any Dubai na Abu Dhabi izahay hanampy anao.
Antsoy izahay izao ho an Fanendrena sy fivoriana amin'ny +971506531334 +971558018669
Eritreritra 42 momba ny “Karazanà tranga 5 momba ny heloka bevava any Dubai sy ny fomba hanampian'ny mpisolovava anao”
Desambra 29, 2014 amin'ny 6: 16 pm
Ity ny momba ny vadiko..Niasa nandritra ny 5 taona tao amin'ny orinasa rano mafana avy amin'ny masoandro tany uae izy. Ary nanafoana ny visa-ny asa izy dia nanao ny zava-drehetra ara-dalàna ary niverina tany amin'ny taninay izahay. Ary nahazo tolotr'asa hafa avy amin'ny mpifaninana aminy teo aloha izy.. izay ao amin'io sehatra io ihany koa no manao solar. Dia nanaiky izany izahay ary niverina teto an-tanindrazana ny vadiko tamin'ny volana Jolay ary nosamborina avy any amin'ny fifindra-monina noho ny seky…izay tsy fantatray akory hoe inona io seky io. Noho izany dia tao anatiny nandritra ny telo andro izy ary namonjy azy izahay. Amin'izao fotoana izao dia miasa sy miasa izy saingy manana raharaha heloka bevava any amin'ny fitsarana dubai izahay. Ity seky ity dia an'ny vadiko dia nangalarin'ny lehiben'ny orinasa teo aloha ary nanoratra 1,20,000 dhs izy ary nilaza izy fa trosa be aminy izany. Niasa tamim-pahatokiana tamin'ny fahombiazan'ity orinasa ity ny vadiko ary toy ny mpinamana izahay. Samy nanana sambo anatiny tsara izy mianakavy fa tato anatin'ny volana vitsivitsy noho ny tsy fahampian'ny varotra sy ny vola.(Ny vadiko irery no mpivarotra ary 1,20,000 2009 2010 isam-bolana no kendreny ary ny zavatra rehetra anisan'izany ny faktiora, ny karama dia miankina aminy )..ny lehiben'ny vadiko tsy dia tsara ny toe-po niaraka taminay ary ny fametraham-pialan'ny vadiko dia nahatezitra azy ary ny andro farany dia nandrahona azy tsy hiverina hiditra amin'ny sehatra iray ihany. Firenena malalaka anefa ity ka afaka miasa eto izahay raha tiana. Ary tsy mitovy ny vokatra amidiny ankehitriny ary samy hafa. Antony iray niverenanay koa dia ny findramam-bola nalainay tany amin'ny banky.. Mila mamita izany izahay. Ka amin'izao fotoana izao dia misy raharaha heloka bevava izahay ary nanendry mpisolovava hisolo tena azy…saingy tena manahy izahay satria mitovy amin'ny vadiko io sonia fanamarinana io izay tsy nosoniaviny ary tsy nomeny ny lehibeny. Ity koa dia iray amin'ireo taratasiny tranainy indrindra tamin'ny 5 na 2. Izany dia mampiseho mazava fa nanao izany izy mba hanakanana ny vadiko hiditra an-tanindrazana. Satria nanahy ny lehibeny fa ho tratra ny tsenany ny vadiko ka ho tonga amin'ny toerana tsara amin'ity raharaha ity ary tiany hosamborin'ny polisy izy ka higadra ny ainy. Ny mpisolovava anay dia milaza fa aza manahy ary izy no hikarakara anay fa ho anay dia alina alina izany… 5 taona no nipetrahanay teto amin'ity firenena ity tamim-pilaminana sy nandoa ny faktiora sy ny zavatra rehetra ara-potoana saingy izao tsy malalaka ny sainay. Mba toroy hevitra aminay izay hanjo ny vadiko. Eo am-pandinihana ny olona nanoratana an'io seky io izahay… ilay mpanohana ny orinasa taloha izay tsy hitan'ny vadiko indroa fotsiny nandritra ny XNUMX taona. Mba toroy hevitra aho hoe inona no hitranga ary inona no azontsika atao mba hisorohana ny fanagadrana eny amin'ny fitsarana. Misaotra anao indrindra.
Janoary 23, 2015 amin'ny 10: 53 pm
Mila mpisolovava iray any UAE aho, azafady mba omeo ahy ny antsipiriany ifandraisana aminao na azafady mba hifandraisa amiko amin'ny mailaka mailaka aho.
May 22, 2015 amin'ny 11: 02 pm
Nametraka fitoriana tamin'ny mpampiasa ahy taloha aho. Roa herinandro lasa izay dia tonga tao an-tranoko izy. Vantany vao nivoaka ny ascenseur aho dia nanomboka nidaroka ahy teo anoloan'ny olona maro ny rahalahiny.
Nametraka tatitra momba ny polisy momba azy ireo aho, nanao tatitra ara-pitsaboana ihany koa. Tsy mafy na hita ny ratra. Famelezana ara-batana anefa izany.
Manana raharaha ao amin'ny fitsarana heloka bevava ao Ajman aho izao, tamin'ny daty voalohany tsy niseho izy ireo. Ny fanontaniako dia, raha hitan'ny fitsarana fa meloka tamin'ny fandikan-dalàna ara-batana izy ireo. Inona ny sazy / sazy mety hamelezana azy ireo? Azo atao ve raha tsy mafy ny ratra, afaka manafaka azy ireo amin'ity raharaha ity ny fitsarana.
Mba valio ary tariho aho.
Jona 16, 2015 amin'ny 6: 37 am
Ny mpandraharaha tena tsy manan-trano dia tsy mamerina ny fandriam-pahalemana aho, nesoriny koa ny entako tsy nasiako fahazoan-dàlana alohan'ny hifarana ny fifanekena.
ho tonga amin'ny raharaha heloka bevava na sivily ve izany, tokony handeha amin'ny biraon'ny polisy na fitsarana ve aho?
Aogositra 5, 2015 amin'ny 6: 44 am
salut! Mila torohevitra ara-dalàna avy amin'ny mpisolovava aho. Alefaso mailaka any amin'ny kaontiko azafady. Misaotra ary hery bebe kokoa
Aogositra 10, 2015 amin'ny 7: 49 pm
Manoratra aho hangataka torohevitra. Ny vadiko taloha dia niasa tany Abu Dhabi efa ho 5y taona ary very asa izy noho ny fiatoan'ny orinasa tamin'ny taona 2009 ary te hiverina any UAE izy hiaraka amiko. Mampalahelo fa manana banky 3 any Abu Dhabi izy ary te hiresaka amin'ny banky miaraka amin'ny karamany amin'izao fotoana izao any Doha sy ny vola azony isam-bolana. Tariho tsara aho izay hanombohako azafady. Matahotra ny handeha mivantana amin'ny polisy aho mety hisambotra ahy satria vadiko izy na hanao sonia mba hiantohana na mety ho tratra any Doha izy ireo.
Azo atao ve na dia tafapetraka any amin'ny banky aza izy ireo hametraka azy am-ponja na Abu Dhabi / Doha noho ny sazy manohitra ny Lalàn'i UAE? Inona no heverinao fa hitranga ny raharaha aterak'izany?
Miandry ny torohevitrao.
Aogositra 14, 2015 amin'ny 7: 24 am
Manana tranga amiko avy amin'ny banky aho ary nahazo tolotra avy amina orinasa manan-kery mandritra ny 35 andro ve, azoko atao ve ny mamita ny raharaha amin'ity vanim-potoana ity.
Septambra 16, 2015 amin'ny 2: 44 am
Ny rahalahiko *Christopher Osera Tuscano) dia nosamborina tao amin'ny seranam-piaramanidina abu dhabi ny 10 jolay 2015 lasa teo.. (tokony ho tamin'ny 10 ora alina) Nandritra ny fotoana tokony hivoahana amin'ny kish mba hanavaozana ny visa fizahan-tany..araka ny filazan'ny manamboninahitra dia manana raharaha izy ka miandry ny fivoahany amin'ny kish izy.. fa ny rahalahiko dia tsy fantany hoe inona izany. . Mila mahafantatra izay azo atao aho mba hamoahana ny rahalahiko ao am-ponja.. azafady mba ampio aho..
Oktobra 24, 2015 amin'ny 2: 37 am
Mila mahafantatra ny antsipirihany bebe kokoa, ny fomba sy ny antony, mifandraisa aminay tamim-pitondrana na handefa mailaka anay amin'ny antsipirihany.
May 2, 2019 amin'ny 11: 47 am
Izaho taloha dia niasa tany amin'ny banky A ary ny vola an'ny mpanjifa no nesorina tamin'ny kaontiny. Efa nandao ny Organisma aho ary efa niara-niasa tamin'ny banky B efa ho herintaona izay. Nijanona teo amin'ny seranam-piaramanidina Abu Dhabi aho avy eo nandefa rob dubai, nanontaniana ary navotsotra saingy natao ny pasipaoroko. Herintaona sy tapany izao ary mbola nanaovana fanadihadiana ny raharaha ary mbola voahazona ny pasipaoroko. Ny fikambanako ankehitriny dia efa nanafoana ahy ihany koa ity tranga ity. Na dia tsy mety aza ary nametraka raharaha tany amin'ny tribonaly momba ny raharaha aza aho.
Ny fanontaniako dia misy ve azoko atao mba hamahana haingana an'io raharaha io mba hamerenako ny pasipaoroko. Satria ankehitriny aho dia nasaina niandry aloha mandra-pahavitan'ny famotorana ary mifindra any amin'ny mpampanoa lalàna izany ary afaka mangataka ny hamotsorana ny pasipaoriko aho satria tsy manan-tsiny amin'ity fotoam-pitsarana iray manontolo ity.
Ary iza koa no afaka mitady fahavoazana satria very ny asako aho noho ity raharaha tsy mitombina ity. Miandry aho fa mazava ny raharaha fa toa mahatsapa ny tokony onitra aho amin'ny fahantrana ara-tsaina sy ara-bola natrehako.
Manoro hevitra amim-pitiavana.
Septambra 28, 2015 amin'ny 12: 29 am
Manoratra aho hangataka torohevitra. ny zaodahiko izao dia any am-ponja dubai eo an-toerana manodidina ny 3 volana izao no vita. tranga fisotroan-toaka ary hiady amin'ny tobin'ny orinasa ary hanao naratra antsalany izy 2 no maratra.
Mandehana any amin'ny hopitaly ny olona ary 10 andro aorian'ny fivoahana dia tsy maninona ireo niharam-boina. ny zaodahiko sy ny 3 victime dia orinasa iray ihany no miasa .rehefa avy niady izy dia nilefitra mivantana tany amin'ny biraon'ny polisy. aorian'ny fiantsoan'ny fitsarana ireo niharam-boina any dia samy milaza fa vonona ny hanaiky lembenana izahay taorian'ny nisentoan'ireo niharam-boina. rehefa tsy fantatra izay nitranga manaraka dia mba lazao izay manaraka ? vita amin'ny volana ho avy ny visa rahavako. Ny orinasa dia manaiky fa miasa amin'ny asa mitovy. fa mbola tsy miantso zaodahiko ny fitsarana.
azafady torohevitra inona no manaraka… ..
Oktobra 24, 2015 amin'ny 2: 25 am
Tsy tena azonay ny tianao holazaina, mangataka anao hihaona aminay manokana.
Novambra 6, 2015 amin'ny 2: 13 pm
Hi! Tompoko, mila fanampiana izahay. Niorina tamin'ny zava-mahadomelina ny rahalahiko. Ao amin'ny tranomaizina foibe al awir izy izao. Lazao amiko, inona ny hetsika tokony hataontsika? Tsy nataony izany. Misy modus mitranga ao amin'ny uae ary iharam-boina koa izy. Azafady, tiako ny miresaka amin'ny olona ao amin'ny biraonao mba hahafahako manazava bebe kokoa. Misaotra anao
Novambra 17, 2015 amin'ny 2: 42 pm
Salama, Mara… Mila mahafantatra bebe kokoa isika, azafady antsoy ny 055 801 8669 ary zahao izahay hanoro hevitra anay maimaimpoana.
Novambra 28, 2015 amin'ny 4: 20 pm
Miarahaba tompoko ry tompoko,
Mila fanampiana izahay. Nosamborin'ny zanak'olo-mpiray tam-po amiko ny 22-11-2015 ny antony alcahol .. Misy hetsika iray ho avy ka nandidy boaty roa redhorse tany amin'ny iray mpifanolo-bodirindrina aminay. Nanodidina ny 9:30 hariva izy ireo dia nanolotra ireo boaty ary rehefa afaka dimy min dia tonga ny CID dia naka ny boaty misy alikaola 2boxes dia nahita boaty roa hafa tao amin'ny rihana faharoa ny villa rehetra ary nentin'izy ireo niaraka tamin'ny zanak'olo-mpiray tam-po amiko. hoy izy ireo fa tsy azo atao ny raharaha. Misy zavatra azontsika atao ve ny manohana azy?
Novambra 28, 2015 amin'ny 12: 04 am
Eny, azo atao ny fahazoan-dalàna, aiza no misy ilay raharaha voasoratra? Mangataka anao hihaona aminay ary hanome antsipiriany bebe kokoa. Misaotra
Janoary 11, 2016 amin'ny 7: 17 am
Hi ms sarah! Mba te hanontany fotsiny ny momban'ny vadiko..saika mitovy amin'ny an'i Malanie io, tratran'ny CID teo anoloan'ny villa anay ny vadiko ny 30 desambra 2015 lasa teo..Nilaza ny CID fa mivarotra toaka satria manodidina ny 3 ka hatramin'ny 4 no tratrany redhorse ao amin'ny efitranon'ny fiara. Tsy mivarotra toaka anefa izy. Nanana ireo toaka ireo izy satria hampiasain’izy ireo amin’ny fankalazana ny taom-baovao. Mbola any am-ponja izy hatramin’izao. Tsy fantatro hoe inona ary aiza no hanombohana ny fisavana ny raharahany satria araka ny filazan'ny polisy ao amin'ny fonja. Ny mpanohana ihany no mahazo alalana hanamarina ny maha izy azy. Ka mbola mihantona aho ary tsy mahalala ny fomba hanampiana ny vadiko. Hitako t@ internet fa misdemeanor ny sokajy misy azy fa ny valim-pikarohana nosoratana na notaterin'ny CID dia mivarotra..sao dia misy mety hivoaka any am-ponja ve izy?afaka manakalo pasipaoro hafa ve isika mba handoa onitra? sa mety handroaka azy ny mpampanoa lalàna??mba ampio aho momba ity raharaha ity na omeo torohevitra aho hoe inona no azoko atao hanampiana azy??misaotra mialoha
Janoary 12, 2016 amin'ny 7: 34 pm
Salama Joan .. tsy mila matahotra ianao, mila mihaona aminay ianao mba hahafahantsika mandroso. Antsoy ny 055 8018669.
Novambra 29, 2015 amin'ny 7: 34 am
Sahirana be ny vadiko. Mila azy hivoaka ny fonja aho. Azafady, alao ny nomerao contact anao hifandraisana aminao.
Novambra 29, 2015 amin'ny 7: 43 am
Ny anadahiko dia any am-ponja noho ny zava-mahadomelina na azo atao na tsia. Tena manahy izahay tato anatin'ny 3 volana
Desambra 5, 2015 amin'ny 4: 25 am
Ry sakaiza malala, tiako ho fantatro fa aorian'ny noroahana ny olona iray tao dubai ho tranga sokajy felony dia azony averina hiditra any nae na raha misy fahafahana ara-dalàna hiditra ao uae, azafady mba omeo vola aho
Desambra 11, 2015 amin'ny 1: 06 am
Mila torohevitra vitsivitsy. 2 volana lasa izay aho no voarohirohy tamin'ny ady tamin'ny barazy. Niantso polisy aho ary nametraka raharaha iray tamina olona tsy fantatra anarana 2 noho ny daroka nataony tamiko. Rehefa nametraka raharaha aho dia nisy nanohitra ahy koa satria nisotro toaka aho. Mbola nametraka raharaha ho azy ireo aho ary nanaiky handoa lamandy ho an'ny alikaola. Voatery nitondra ny raharaha aho satria mila pasipaoroko mankany amin'ny tanindrazako. Nanefa lamandy 2000 tany amin'ny paositry ny polisy aho ary naveriko ilay pasipaoroko. Nandeha ravina tany amin'ny tanindrazako aho nandritra ny iray volana. Rehefa niverina aho dia notanana tao amin'ny seranam-piaramanidina aho nilaza fa misy tranga manohitra ahy amin'ny alikaola.
Nentina tany am-ponja aho ary voatery nandoa lamandy indray tamin'ny 2000 mba hivoaka.
Ny fanontaniako dia ny fomba ahafahako manaisotra ny anarako mba tsy hisy olana amin'ny seranam-piaramanidina. Azo atao koa ny mitaky famerenam-bola be karama fanampiny. Nahazo karama tamin'ny vola andoavam-bola teo aloha koa aho.
Izay fanampiana rehetra dia ho ankasitrahana tokoa.
Janoary 16, 2016 amin'ny 3: 50 am
Manana fampindramam-bola ho an'ny fiara sy fampindramam-bola manokana aho (ho an'ny vola aloa amin'ny fiara) amin'ny banky Islamika any Dubai, tonga tany amin'ny tanindrazako aho mba hiala sasatra ary tsy afaka niverina noho ny lozam-pianakaviana. Hatramin'ny nisian'ny taratasiko izao, ny banky dia nameno raharaha niampanga ahy. Ny tena ratsy indrindra dia nalain’ny Kaominina Dubai ho fiara tsy mataho-dalana ilay fiara ary natao lavanty tato ho ato. Mitentina 45,000 AED ny trosako amin'ny banky (35,000 ho an'ny fampindramam-bola fiara ary 10,000 ho fampindramam-bola manokana ho an'ny fandoavam-bola). Niezaka naka fihenam-bidy avy amin'ny banky aho mba handoavana indray mandeha, fa ny banky dia manizingizina ny vola 45,000 AED manontolo izay tsy azoko omena ankehitriny. Rehefa nojerena tany amin'ny paositry ny polisy dia 16,000 16,000 AED ihany no nametraka fitoriana ny banky. Nanamarina tamin'ny banky aho raha afaka mandoa 45,000 mivantana ary mahazo ny famotsorana, nanantitrantitra izy ireo fa ny totalin'ny AED 16,000 ihany. Mba ampio aho, azoko atao ve ny mandoa ny vola any amin'ny biraon'ny polisy (16,000) ho an'ny raharaha izay nametrahana sy hahazo ny famotsorana? sa mbola hisy raharaha hafa hiampangana ahy rehefa avy nandoa an'io 45,000 io aho. Nijery ny banky aho raha nahazo tambin-karama tamin'ny lavanty izy ireo, saingy tsy nety nanome vaovao. Tena very hevitra aho, raha miziriziry amin'ny AED 16,000 ny banky, nahoana no 16,000 fotsiny no nametrahan'izy ireo ny raharaha. Vonona aho handoa an'io XNUMX io, saingy tsy vonona hanaiky izy ireo. Afaka mandamina izany vola izany ao amin'ny biraon'ny polisy ve aho anio ary mahazo fahazoan-dàlana? sa mbola hisy raharaha hafa hiampangana ahy momba ny volan'ny fifandanjana rehefa avy nandoa io vola io aho. Mba tariho aho.
Aprily 21, 2016 amin'ny 11: 13 pm
Ilay namako dia nandeha avy tany Etazonia ho any dubai. Izy nitondra rongony. Sais izy fa navela handeha an-dàlana avy any Washington, saingy nosamborina avy hatrany rehefa tonga tany UAE. Tsy fantatray akory hoe aiza no hanombohana.
Jolay 21, 2016 amin'ny 9: 06 pm
Manoratra momba ny raharaha momba ny lehilahy aho. Noho ny olana ara-bola dia tsy nindramina ny CC & izao dia nametraka raharaha ny banky. Izy no mandre voalohany azy afaka roa andro ho avy. Inona no vahaolana raha ao anaty krizy ara-bola isika fa tsy misy fanampiana manodidina. Mangataka anao hanoro hevitra amin-katsaram-panahy ary hampahafantaro anay ny fizotry ny fitsarana.
Manantena ny valinteninao…
Septambra 12, 2016 amin'ny 6: 58 am
Izaho XXX dia ny rahalahiko dia voatazona amina raharaha zava-mahadomelina hatramin'ny niakarako tany amin'ny paositry ny polisy dia tsy misy valiny avy amin'izy ireo fa izy ireo ihany no manome ahy ny raharaha 2016/16024
ao amin'ny biraon'ny polisy Rashidiya izy hatramin'ny alakamisy alina tonga tao an-tranoko ny CID Officer fa tsy nahazo na inona na inona tao an-tranonay izy ireo ary tsy nilaza tamiko ny tena zava-nitranga tamin'izaho niresaka tamin'ny rahalahiko hoy izy ny alakamisy lasa izy. adidy ary tamin'ny 7 ora hariva dia niantso azy ny namany hihaona aminy fotoana be niantsoan'ny namany azy nefa izy nilaza fa hamita ny asany ary avy eo izy vao ho avy hihaona aminy izy dia handeha hihaona amin'ny namany hariva amin'ny 7 hariva ary any ny manambonin'ny CID dia mandoa azy
hatramin'ny andro izay dia miaraka amin'ny CID izy. Rehefa mangatsiaka azy any an-trano ny CID dia mitady fotsiny izy ireo fa mampahafantatra anay izy fa voarohirohy amin'ny raharaha rongony izy.
tompoko, manambady ihany izy vao 2 taona talohan'izay ary zaza iray taona 1 taona izy ireo tany India ary ny rahalahiko dia tsy manana firaketana heloka bevava na indiana miasa any amin'ny orinasa couriour izy.
Mahatsapa aho fa tsy afa-manoatra izay tokony hatao, mba ampio aho
XXX ity no nomerao azafady hiantso ahy sy hitarika ahy hamonjy ny ain'ny rahalahiko
Oktobra 31, 2016 amin'ny 5: 32 pm
Misy namako miasa 2 taona izao any Dubai, tamin'ny 6 volana voalohany niasany dia tratra nangalatra vola tamin'ny vola tamin'ny alàlan'ny CCTV izy ary niaiky fa manodidina ny 1-3k Dirhams ny vola, taorian'io hetsika io dia navela hiasa indray mandra-pahatongan'ny sisa amin'ny fifanarahana nataony, avy eo iray volana talohan'ny fifanarahana nifarana dia nandefa taratasy fametraham-pialana diso izy fa tsy taratasy tsy fanavaozana .. Fantatro avy amin'ny anjarany fa hadisoany izany, ankehitriny dia manafoana ny tapakilan-karamany malalaka hody ny orinasa , tsy misy gratuity sy vola, Ankehitriny dia niantso ny raharaha momba ny Kaontina aho ary nilaza izy ireo fa taratasy iray ihany no horaisin'izy ireo fa TSY FANAFAHANA mailaka an-tsoratra fa ny zavatra izao dia omena an-keriny izy izao mba tsy mitaraina avy eo nangataka mba handoa manodidina ny 10k na mihoatra ny zavatra nangalariny teo aloha, Ankehitriny dia manaiky ny fomba fandoavam-bola izy ireo fa ankehitriny ny orinasa dia manao taratasy fandaminana ho azy fa tsy avela hiasa amin'ny orinasa mpifaninana izy ary modia any an-tranony n tsy misy tapakila.
Manontany fotsiny aho izao hoe inona no fomba tsara indrindra hiatrehana izany? Satria tsy fantatray ny momba ny lalàna ary manery ny namako izy ireo fa raha tsy mandoa izy dia hiantso polisy ary hanao tatitra. Manantena aho fa afaka manampy!
Novambra 10, 2016 amin'ny 3: 26 am
Efa tany am-ponja tao AUH ny rahalahiko iray taona 2002 tamin'ny fangalarana zava-mahadomelina ary noroahina izy taorian'ny 1 yr. ary efa nody tany aminy niaraka tamin'ny fianakaviany.
Mangataka asa any amin'ny firenena hafa izy izao ary mila tatitra momba ny polisy navoakan'ny UAE.
Ny fanontaniantsika dia, satria tany am-ponja noho ny fidorohana zava-mahadomelina izy, ho raisina ho raharaham-pitsarana ve izany? Sa raha efa nanadio ny raharahany dia hilaza ve ilay tatitra fa afaka heloka bevava izy?
Novambra 22, 2016 amin'ny 3: 43 am
Salama Andriamatoa Sarah
Izaho dia Arun mipetraka any Dubai ary nanapitra ahy ny orinasa noho ny fahaverezan'ny 150000 izay nataon'ny lehibeko teo aloha teo fa tsy ao amin'ny firenena intsony izy.
Nametraka raharaham-piasana izy ireo ary koa ny raharaha ho an'ny polisy. Mijanona eto miaraka amin'ny vady aman-janako 4 taona aho tsy misy vola eto mandritra ny roa volana lasa izay an-tsokosoko maro hivelomana eto. Izao dia nangataka ahy ny polisy ny sabotsy tamin'ny fametrahana ny raharaha.
Mila torohevitra momba ny fomba hiverenan'ny polisy bebe kokoa. Izaho koa dia manana fakana am-bavam-potoana nomanina tao amin'ny tribonaly Labour amin'ny faha-29 moraly. Torohevitra Pls hoe ahoana no tokony hanohizako. Ny pasipaoroko no mipetraka ao amin'ilay orinasa.
Desambra 27, 2016 amin'ny 4: 19 pm
Any am-ponja izao ny rahalahiko izao any sharjah nanomboka ny 25 desambra ..
Izy no nampiasain'ny fiara an'ny raiko, ary tsy nanana fahazoan-dàlana ny zokiko .so noho ny lozam-pifamoivoizana izy tamin'io fotoana io.
Ka izao, ny tenako dia mitondra fiara tsy misy fahazoan-dàlana, herin'ny alikaola ary ny lozam-piarakodia.
Niandry ny hivoahan'ny raharaham-pitsarana izy izao.
Tratra ihany koa ilay fiara.
Ny fanontaniako dia: amin'ireto tranga ity hoe hafiriana no hitranga am-ponja izy?
Misy ve io?
Afaka manome azy ny raharaha ve ny mpampiasa ny rahalahiko satria ny tatitra nataony tsy niasa ??
Ary ho an'ny mpampiasa ny raiko ve izy ireo afaka mametraka raharaha amin'ny raiko?
Na mety ho ratsy kokoa aza izy ireo dia manana ny zo hanafoana ny raiko ary hametaka ilay tratra?
Misaotra anao ary miandry ny valiny
Janoary 2, 2017 amin'ny 10: 56 pm
Salama azafady azonao atao ny manampy ahy, miampanga ahy ny lehiben'ny lehibeko dia na dia tsy fantatro aza ny tenimiafiny ao amin'ny mailaka dia notohizany fa fantatro izany. Ny tena nitranga dia nosokafany ny mailaka tao amin'ny solosainako ary adinony ny nanao logie ary ny tenimiafina ihany koa dia mamonjy mandeha ho azy ao anatin'io solosaina io angamba izy dia mitanatana hoe "save password" dia isaky ny nanokatra gmail aho hanokatra ny kaontiko hisokatra ny mailaka. Avy eo dia nalainy ny idirako ary nomeny ny polisy ary nilaza izy fa nametraka raharaha ho ahy izy ary nanao fanadihadiana momba ny fikikisana. Ahoana no hahafantarako raha manana tranga mbola miandry aho ary ahoana no atao hoe hacking raha tsy izy no nanokatra ny mailaka ary tsy nanao ratsy taminy aho. Tsy fantatro na dia ny tenimiafiny fotsiny aza. Manizingizina izy fa alefa amin'ny alàlan'ny fahefany manokana aho. Nasaiko azy ny hataoko amin'ny rakitra ataony? Nasainy nanoratra taratasy aho fa tsy hanokatra azy intsony io. Tsy tiako ny hanao an'io fa manery ahy izy. Satria fantatro fa azo ampiasaina hiady amiko izany dia noraketiko ny fomba nanereny ahy hanao izany. Inona no mety ho raharaha arahin'izy ireo ary inona no zavatra ara-dalàna tokony ho fantatro. avereno fanampiana. Misaotra
Febroary 14, 2017 amin'ny 4: 08 am
Nametraka fitoriana tamin'ny mpampanofa ahy aho izay nanararaotra ny tranony tamin'ny alàlan'ny Airbnb. Ilay ramatoa izay nanararaotra taminy dia tsy nahalala hoe tsy ara-dalàna izany saingy rehefa hitany fa niditra an-tsokosoko tany amin'ny trano mpanofa hafa izy dia nangataka tamin'ny mpitantana izy hanova ny hidiny. Tamin'ny fotoana nialany dia nomeny ahy ny lakile. Noraisiko ny lakilen'ny mpitsara tamin'ny fihainoana ahy mba handefasako azy any amin'ny fitsarana fa nanoro hevitra ahy izy hitandrina ny lakile ary miandry ny didim-pitsarana. Nalefako tokoa ny taratasy nosoniavin'ny mpisolo vava fa nampanofa azy tany aminy izy ary ny tapakila fandoavam-bola tany aminy sns nandritra ny fotoana nijanonany dia nanafika ny trano fonenany ny tanàna ary naka porofo momba ny famporisihana ary nanolotra izany tamin'ny tribonaly!
Na izany aza androany dia nampiaiky ny polisy ny tenako fa niditra tao amin'ilay trano aho raha mbola tao ny fianakaviany.
Ka dia nosokafany ilay trano.
Nankany amin'ny fitsarana aho, nilaza tamiko izy ireo hiandry ny fitsarana.
Mieritreritra aho fa mety hametraka heloka bevava amiko na resaka sivily izy.
Inona no azony atao rehefa avy nametraka ny porofo rehetra aho tany amin'ny fitsarana amin'ny fitsarana ady hevitra.
March 5, 2017 amin'ny 2: 41 am
Ry Andriamatoa malala
Vao haingana dia nosamborina ary notazonina nandritra ny 24 ora noho ny mamo mamo lava sy nifamaly tamin'ny mpamily fiarakaretsaka iray
Navelan'izy ireo ahy izy ireo saingy notazonany ny pasipaoroko ary tsy maintsy nanatrika fitsarana tamin'ny 16 martsa aho
Misy hevitra raha handeha higadra ve sa tsia?
Aprily 2, 2017 amin'ny 12: 44 am
Salama, tena mila ny fanampianao aho.
Nosamborina ny vadiko ny zoma lasa teo tao amin’ny fivarotany tao amin’ny tranombarotra hili. Talohan'io andro io, ny hariva dia nilaza izy fa niantso azy ny polisy ary nilaza azy ho any amin'ny biraon'ny polisy hili satria misy mpanjifa mitaraina. Ny zoma teo tokony ho tamin'ny 4 ora tolakandro no fotoana farany niresahanay fa tsy afaka niresaka firy izahay satria nilaza fa horaisin'ny polisy ny findainy, hoy izy hoe hafindra ao amin'ny tobin'ny polisy al murabaa. Androany 2 aprily 2017, avy any Dubai aho nandeha tany al ain mba hisava ny vadiko saingy tsy hita taratra tamin'ny rafitra izay fitazonana azy ankehitriny. Nampiakarina ny raharaha ary napetraka tany Abu Dhabi ary nilaza izy ireo fa i cid no tratra ny vadiko. Andro faha-3 izao no nisamborana azy, tsy hitako izay misy azy ankehitriny. ampio aho azafady
Septambra 5, 2017 amin'ny 6: 30 am
Nifamaly tamin'ny polisy iray aho ary avy eo nankany amin'ny paositry ny polisy ary notsapain'izy ireo aho noho ny alikaola ary misy isan-jaton'ny alikaola ao anaty rako ity tamin'ny Mey 2015 tao Abudhabi. Ankehitriny te-hahazo fahazoan-dàlana ho an'ny polisy ho an'ny asa aho, nanandrana nanao an-tserasera ary nahazo hafatra aho fa tsy maintsy mitsidika ny haino aman-jery fiarovana, midika ve izany fa mbola ho hita eo amin'ny firaketako izany fiampangana izany. Herintaona sy tapany lasa izay no nitrangan'izany, nandany 2 andro tany am-ponja aho satria faran'ny herinandro lava be izany, nihaona tamin'ny mpampanoa lalàna avy eo dia nankany amin'ny fitsarana herinandro vitsivitsy taty aoriana. Ny tenin'ny mpitsara dia nokaravasina i gey, toy ny nisotro toaka silamo ka nankany amin'ny sampana fanitsiana izy ireo dia nanao ny dian-tànana sy ny sary fotsiny ary namoaka ahy. Ankehitriny ny fanontaniako dia hiseho amin'ny rakitsoratro ve izany sa tsia? Ary mety ve ny mandeha any amin'ny haino aman-jery fiarovana na mety ho olana izany. Mihidy ny raharaha satria nandeha imbetsaka aho, tsy nisy olana. Mba toroy hevitra.
May 9, 2018 amin'ny 6: 53 pm
Salama. Nosamborin’ny CID ny vadiko ny 6 martsa teo raha nahazo vaovao izy ireo fa mivarotra rongony. Nahitana rongony kristaly milanja 2 grama izy ary nosavaina koa ny tranonay fa tsy nahita na inona na inona. Tsy nisy ny takalo vola ary niaiky ny vadiko fa ho an’ny tena manokana ihany io vola io. Nihaona tamin’ny fampanoavana indroa izy ary nahazo taratasy milaza fa hitohy hatramin’ny 26 mey ny raharahany. Nangataka fahafahana vonjimaika tamin’ny alalan’ny foibe fanoratana ny rainy ary nilaza izy ireo fa efa 2 andro lasa izay. Ity tranga ity dia nitranga tany Dubai.
Q1. Mandra-pahoviana no ahafahan'izy ireo manadihady raharaha? Izy irery ary ny raharaha nanenjehana azy dia toa heloka bevava tamin'ny fivarotana rongony. Ny vadiko dia nandà izany fitakiana izany, tamin'ny fotoana roa niresahany tamin'ny mpampanoa lalàna. 2 volana mahery izay no tsy nisy fanavaozana.
Q2. Ahoana ny fomba fiasan'ny fahazoan-tokantrano ary amin'ny firy no hitranga?
Oktobra 17, 2018 amin'ny 12: 32 pm
Nahazo ahy izany rehefa nolazainao fa fandoroana heloka dia heloka bevava ka higadra hatramin'ny 20 taona ilay olona noho ny fandoroana na fandoroana fananan'ny olon-kafa. Mety hiatrika an'io ny rahalahiko satria nandrehitra afo tamina afo tsy nahy izy rehefa nilalao afomanga. Mieritreritra aho fa mila manakarama mpisolovava avy hatrany isika raha toa ka manapa-kevitra ny hametraka raharaha ny mpifanila trano. Misaotra anao.
Oktobra 30, 2018 amin'ny 11: 57 am
Mahaliana ny mahafantatra fa ny lalàna mifehy ny heloka bevava dia miatrika ny zava-drehetra manomboka amin'ny asa ratsy ka hatramin'ny heloka bevava sy heloka bevava. Tsy tsapako fa misy ambaratongan'ny heloka bevava isan-karazany ary noho izany ny haavon'ny lalàna samihafa hiatrehana ny asan-jiolahy. Miaraka amin'ny asa ratsy toa an'i DUI, manontany tena aho hoe ohatrinona ny onitra mahazatra eo ambanin'ny lalàna heloka bevava.
Janoary 31, 2019 amin'ny 8: 22 am
Vao tsy ela akory dia nisy nangalatra ny namako. Tsara ny fahalalana fa ireo mpisolovava amin'ny heloka bevava dia afaka mitantana tranga toy izany, toa ny voalazanao. Mety ho safidy tsara izany hahazoany onitra sy fahamarinana.
May 10, 2019 amin'ny 7: 27 pm
Izaho dia miasa ao amina orinasa iray toy ny mpandray mandray azy ireo tamin-kery dia nilaza tamiko fa hitady vola dia nolazaiko azy ireo fa tsy izany no hataoko fa hoy izy ireo raha tsy very asa aho, raha izany dia nilaza tamiko fa omeo antoka aho any amin'ny fandraisana nefa izy ireo dia nilaza tamin'izy ireo mba hametraka cctv eo an-tampon'ny latabatra izay hipetrahako rehefa avy ny prohabation no nandehanako dia nankatoavin'ny orinasa rehefa niverina aho, dia niampanga ahy ho nangalatra vola teo ry zalahy avy tany no lehiben'ny birao. naka ny pasipaoroko nitondra ahy tao anaty efitrano iray dia nandrahona ahy hanao sonia taratasy iray izay nilaza fa nangalatra ny vola aho ary haveriko ao anatin'ny iray volana ary io andro io dia nifarana tamin'io andro io nandehanako ary nanao raharaha momba ny asa an-terivozona. i dues ary lasa tany amin'ny CID aho fa rehefa afaka iray volana dia nanao raharaha heloka bevava izy ireo ary efa roa taona izay no nahatafintohina ahy tamin'ity raharaha ity ka tsy afaka mandeha aho satria manana làlana fitsangatsanganana noho io raharaha io na dia efa nandresy aza aho. ny raharaha momba ny asa atao amin'ny orinasa ary mila mandoa ahy izy ireo nefa iray dia eny izy ireo aza mandoa vola fa izy ireo ary dia manana ny porofo rehetra fa tsy manan-tsiny aho ary bevohoka ary tiako ny hamarana an'io raharaha io raha toa ka ny tolotra azafady, ampio aho.
Juanitah Ntambi Sarobidy
Desambra 22, 2020 amin'ny 7: 12 pm
Manana ny rahalahiko izay sakaizan'ny bandy iray izay inoako fa nandroba fiara iray ary hita ny rahalahiko nitondra azy. Nentina am-ponja vonjimaika sy fiara izy ary notazomin'ny polisy saingy tsy nahalala 2 zlweeks taty aoriana izy dia voatazona amd avy eo rehefa tonga tany amin'ny polisy izahay dia nilazana fa nafindra tany amin'ny fonja hafa izy ary nanenjika anay izy ireo nefa tsy nisy pitsopitsony momba ny heloka . Ny namana dia anaty rivotra (tompon'ny fiara) ary vahiny izahay ary tsy mahalala izay hatao. Izay manoro hevitra momba izay azo atao na fanagadrana. Ny rahalahiko dia nanana visa mpitsidika izay tapitra ny volana Janoary 2021. Inona no mitranga aorian'izany? Misaotra mialoha.